‘भाइरल ब्वाई’को मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्छ, कारण यस्ताे छ – Everest Dainik – News from Nepal
‘भाइरल ब्वाई’को मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्छ, कारण यस्ताे छ
काठमाडाै‌ । रुपक सापकोटाले झापाबाट फेसबुक लाईभ गरे, २५ माघ ०७३ मा । जसमा एक बालकले उत्साही हुँदै गीत गाएका छन् । सुरताल नमिले पनि स्वर मीठै छ ।
हुलिया अति विपन्न परिवारको जस्तो छ । भिडियोमा उनले भनेका छन्,- म बाटोमा गीत गाएर दिनको हजारजति कमाउँछु । चामल किन्छु । खेती गर्छु । ड्याडी थला पर्नुभएको छ । त्यसपछि बालकबारे धेरथोर खोजी हुन थाल्यो । ९ महिनापछि नवराज उप्रेतीले उनीसँगको अनौपचारिक अन्तर्वार्ता आफ्नो युटुवम च्यानलमा अपलोड गरे ।
त्यसपछि उनका अरु दुइचार भिडियो सार्वजनिक भए । अनि, कालजमाना अनुसार ती बालक अर्थात अशोक दर्जीभाईरल भईहाले ।अहिले नेपाली युनिकोडमा अशोक दर्जी टाईप गरेर युटुवमा सर्च गर्दा २२ हजार र अंग्रेजीमा ११ हजार रिजल्ट आउँछ । यही आंकडाबाट आकलन गर्न सकिन्छ, अशोकले कति चर्को एटेन्सन पाएका छन ।
सरसर्ती हेर्दा लाग्छ, यो सबै उनी र उनको प्रतिभाप्रतिको प्रेम हो । युटुवमा उनका लागि बरदान सावित भयो । तर, सँगै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ! गरिब परिववारमा जन्मिएको र पढाईबाट वञ्चित बालकले यति छिट्टै एक्सपोजर पाउँदा मनोवैज्ञानिक असर पर्दैन ? नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ ।